Qarax geystay qasaare dhimasho iyo dhaawacbo leh oo ka dhacay Garoowe – Radio Muqdisho
Qarax geystay qasaare dhimasho iyo dhaawacbo leh oo ka dhacay Garoowe
Qarax xoogan ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta Gobolka Nugaal, kaasi oo ay ku geeriyoodeen tiro dad oo isugu jira shaqaalaha hay;adaha UN-ka iyo kuwa kale oo goobta ka ag dhawaa.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Nugaal Awoowe ayaa ku soo waramay in qaraxa uu ahaa gaari nuuca minibus-ka ah ee u shaqeynayay hay’adaha Qaramada Midoobay, waxaana qaraxa uu ahaa mid ku xiran gaariga, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ku dhawaad ay qaraxa ku geeriyootay todobo ruux oo u badan shaqaalaha UN-ka ee saarnaa gaariga, walina si dhab ah looma oga, inkastoo ay socdaan baaritaanno ay wadaan ciidamada amniga ee Maamulka Puntland.
Dadkii falka qaraxa ku dhaawacmay ayaa qaarkood loola cararay goobaha caafimaadka, waxaana gebi ahaanba la xiray waddooyinka soo gala halka uu qaraxa ka dhacay.
Ciidamada amniga oo baadi goobaya rag dil Dhuusamareeb ugu geystay askar ka tirsan ciidanka